Markabka Meizu 16 wuxuu gaaray hal milyan oo boos celin China ah Androidsis
Meizu 16 wuxuu gaarayaa hal milyan oo boos celin ah
Eder Ferreño | | Meizu, Mobiles
Berri, Ogosto 8, Meizu 16 cusub ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Waa jiilka cusub ee dhamaadka sare ee soo saaraha Shiinaha, oo doonaya inuu dhex maro suuqyada caalamiga moodooyinkaas. Toddobaadyadan oo dhan waxaan helnay faahfaahin ku filan oo ku saabsan taleefannadan cusub. Marka waxaan ka haysannaa fikrad cad oo iyaga ku saabsan.
Ka hor intaan la bilaabin, isticmaaleyaasha ku sugan Shiinaha ayaa horey u sii haysan kara Meizu 16-kan. Waxayna u muuqataa inay si guud u sameeyeen, maxaa yeelay keydkooda ayaa guul u ah soo saaraha Shiinaha, sida ay iyagu iyagu faalleeyeen. Waxaan horeyba uheysanay tiradaada boos celinta ilaa iyo hada.
Waa suurtagal in lagu keydiyo meizu 16 bogagga internetka ee kala duwan ee Shiinaha, dukaamada ugu caansan dalka, dadweynuhuna aad ayey u xiiseeyaan moodelladan. Sababtoo ah keydku waxay horey u gaareen hal milyan, bayaannada shirkadda lafteeda.
Marka tani waxay calaamad wanaagsan siineysaa shirkadda, iyo waxay muujineysaa inay daneynayaan taleefannadan macaamiisha. Markaa suuqgeynteeda Shiinaha waa inaan filaynaa inay iibin wanaagsan yeelan doonto. Haddii aan uga gudubno tirada boos celiska ah, taasi macnaheedu maahan inaad had iyo jeer iibsan doonto taleefanka.
Sidaa darteed, waa inaan aragnaa waxqabadka Meizu 16-kan ay suuqa ku leeyihiin. Soo bandhigideeda rasmiga ah berri waxay unoqon doontaa cunsur muhiim u ah adeegsadayaal badan, oo laga yaabo inay ka caawiso inay hoos udhacaan oo ay sharad ku saaraan soosaaraha heerka ugu sareeya. Dhacdadu waxay u badan tahay inay ka hadli doonto bilawga caalamiga ah ee taleefannada.
Moodooyinka Meizu ayaa caan ka noqonaya caalamka. Sidaa darteed, caqli gal ma noqon doonto in laga fekero in meizu 16-kan ay lahaan doonaan joogitaan caalami ah oo ballaaran. La soco berri maadaama aan ogaan doonno faahfaahinta ku saabsan noocyada dhammaadka dhammaadka sumadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Meizu 16 wuxuu gaarayaa hal milyan oo boos celin ah
Faahfaahin cusub oo farsamo ee Leagoo S10 ayaa la xaqiijiyay